ဖေ့ဘုတ်မှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့စုံတွဲလေး...(ဓါတ်ပုံ) - MDY Online Knowledge
အခုတလောမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ Facebook တခွင်မှာ လူကြိုက်နှစ်သက်မှုအများဆုံး ခံယူနေရတဲ့ စုံတွဲလေးပါ။ အပြင်ပန်းကြည့်ရင်တော့ မလိုက်ဖက်ဘူးလို့မြင်မိမှာပါ သို့သော် သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ အချစ်သံယောစဉ်တွေဟာ ဘယ်လောက်ထိခိုင်မြဲနေပြီလဲဆိုတာကိုတော့ ဒီဓါတ်ပုံလေးတွေ ကြည့်ရုံနဲ့ သိရှိနိုင်ပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ ဆိုရှယ်အကောင့်တွေမှာ သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ အချစ်သက်တမ်း ၃ နှစ်နဲ့ ၆လပြည့်အဖြစ် မှတ်တမ်းတင်ပုံရိုက်ကူးခဲ့ပြီး မျှဝေခဲ့ရာမှ လူကြိုက်နှစ်သက်မှု အများဆုံးခံခဲ့ရပါတယ်။
ဝေဖန်တဲ့မှတ်ချက်တချို့ကို တွေ့ရပေမယ့် နှစ်သက်အားကျတဲ့မှတ်ချက်တွေလဲ အများကြီး ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ကောင်မလေးရဲ့ ဆိုရှယ်အကောင့်မှာ သူမရဲ့ချစ်သူကို စတွေ့ခဲ့တုန်းက ရာထူးရော အလုပ်ရော မရှိခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။သူမနဲ့တွေ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာ ပြောင်းလွဲလာတဲ့ကောင်းလေးရဲ့ လုပ်ရပ်ကလဲတကယ်ကိုနှစ်သက်စရာပါ။သူ့အတွက် ဘဝကိုအကြီးမားဆုံးပြောင်းလွဲပစ်လိုက်တယ်လို့ ဆိုရမှာပါ။
တကယ်တမ်းတော့ သွေးမတော်တဲ့သူနှစ်ယောက် အတူပေါင်းပြီး ရှေ့ဆက်ဖို့ရာက တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ညှိနုှိင်းနားလည်ပေးနိုင်မှုကလဲ အရေးကြီးပါတယ်။ဒါကြောင့် ဒီကောင်လေးနဲ့ကောင်းမလေးကိုလဲ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အပြည့်အဝနားလည်ပေးနိုင်ပြီးခရီးဆုံးထိ လျှောက်လမ်းနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်….
KZS (MDY-Online Knowledge)
Photo by-Ei Thazin Myo’s FB
အခုတေလာျမန္မာျပည္သူေတြရဲ႕ Facebook တခြင္မွာ လူၾကိဳက္ႏွစ္သက္မွုအမ်ားဆံုး ခံယူေနရတဲ႕ စံုတြဲေလးပါ။ အျပင္ပန္းၾကည္႕ရင္ေတာ႕ မလုိက္ဖက္ဘူးလုိ႕ျမင္မိမွာပါ သို႕ေသာ္ သူတုိ႕ႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ အခ်စ္သံေယာစဥ္ေတြဟာ ဘယ္ေလာက္ထိခုိင္ျမဲေနျပီလဲဆုိတာကုိေတာ႕ ဒီဓါတ္ပံုေလးေတြ ၾကည္႕ရံုနဲ႕ သိရွိႏုိင္ပါတယ္။သူတုိ႕ႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ ဆုိရွယ္အေကာင္႕ေတြမွာ သူတုိ႕ႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ အခ်စ္သက္တမ္း ၃ ႏွစ္နဲ႕ ၆လျပည္႕အျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ပံုရုိက္ကူးခဲ႕ျပီး မ်ွေ၀ခဲ႕ရာမွ လူၾကိဳက္ႏွစ္သက္မွု အမ်ားဆံုးခံခဲ႕ရပါတယ္။
ေ၀ဖန္တဲ႕မွတ္ခ်က္တခ်ိဳ႕ကုိ ေတြ႕ရေပမယ္႕ ႏွစ္သက္အားက်တဲ႕မွတ္ခ်က္ေတြလဲ အမ်ားၾကီး ပုိင္ဆုိင္ခဲ႕ရပါတယ္။ေကာင္မေလးရဲ႕ ဆုိရွယ္အေကာင္႕မွာ သူမရဲ႕ခ်စ္သူကုိ စေတြ႕ခဲ႕တုန္းက ရာထူးေရာ အလုပ္ေရာ မရွိခဲ႕ဘူးလုိ႕ဆုိပါတယ္။သူမနဲ႕ေတြ႕ျပီးေနာက္ပုိင္းမွာ ေျပာင္းလြဲလာတဲ႕ေကာင္းေလးရဲ႕ လုပ္ရပ္ကလဲတကယ္ကုိႏွစ္သက္စရာပါ။သူ႕အတြက္ ဘ၀ကုိအၾကီးမားဆံုးေျပာင္းလြဲပစ္လုိက္တယ္လုိ႕ ဆုိရမွာပါ။
တကယ္တမ္းေတာ႕ ေသြးမေတာ္တဲ႕သူႏွစ္ေယာက္ အတူေပါင္းျပီး ေရွ႕ဆက္ဖုိ႕ရာက တစ္ေယာက္ကုိတစ္ေယာက္ ညိွႏုွိင္းနားလည္ေပးႏုိင္မွုကလဲ အေရးၾကီးပါတယ္။ဒါေၾကာင္႕ ဒီေကာင္ေလးနဲ႕ေကာင္းမေလးကုိလဲ တစ္ေယာက္နဲ႕တစ္ေယာက္ အျပည္႕အ၀နားလည္ေပးႏိုင္ျပီးခရီးဆံုးထိ ေလွ်ာက္လမ္းႏုိင္ပါေစလုိ႕ ဆုေတာင္းေပးလုိက္ပါတယ္….
ရည်စားမရှိသူများမြင်လျှင် ထိုင်ငိုသွားနိုင်သည့် အမျိုးသားတစ်ဦး၏ ရေပြင်ကျယ်ကျယ် လှေကလေးပေါ်မှာ ကောင်မလေးနှစ်ယောက်ကို လက်ထပ်ခွင့်တောင်းသည့် videoဖိုင်
Previous Article မန္တလေးမှာ ကိုဗစ်ကာလ ဆွမ်းခံ ပြန်လည်ကြွနေတဲ့ သံဃာတော်များရဲ့ ကြည်ညိုဖွယ် ပုံရိပ်များ
Next Article အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်လေးတွေရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်များကို မှတ်တမ်းတင်ထားသော ပုံရိပ်များ